Myanmar Youth Media Club - MYMHOT - Low Self-Esteem? You are doing it wrong!
Low Self-Esteem? You are doing it wrong! Low-self-esteem ဆိုတာလူတိုင်း ခဏခဏခံစားကြရမှပါ။ ခံစားရတိုင်း ငါ့စိတ်မထား တတ်သေးဘူး ဆိုပြီးအပြစ်တင် နေမိလား? ဒါဆိုရင်တော့ဒီ Article လေးကို ဖတ်သင့်နေပါပြီ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူချက် (Self-Esteem) တွေနိမ့်ကျ နေပါသလား။ သင့်ကိုယ်သင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဖို့ကြိုးစားနေ တာထက်စာရင် သင်နဲ့သူများတွေ ရဲ့ကြားက ဆက်ဆံရေးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ သင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာတခဏ သို့မဟုတ်ရေရှည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူချက်တွေ နိမ့်ကျနေ ပါသလား။ ပြဿနာ၏ ဇာစ်မြစ်ဟာ သင့်စိတ်ထဲမှ စတာထက်စာရင် သင်နှင့်ဆက်ဆံ နေရတဲ့ လူတွေရဲ့ကြားက ပြဿနာ တွေကစတာ ပိုဖြစ်နိုင် ပါတယ်လို့ Psychology Today မှဖော်ပြ ခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူချက် ဆိုတာကို ကားထဲက ဆီဘယ်လောက် ကျန်သေးလဲ ပြတဲ့ဒိုင်ခွက်လို့ သဘောထား ကြည့်လိုက်ပါ။ အများစုက ဒိုင်ခွက်ပေါ်မှာ ဆီကုန်ပြီ ဆိုတဲ့အမှတ် မရောက်အောင် ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို ကားဆက်မောင်း နေရင်းအကြံ ထုတ်နေကြတယ်။ လုပ်သင့်တဲ့ အရာဖြစ်တဲ့ ကားဆီဖြည့် တာကို မလုပ်ပဲ ဒီဒိုင်ခွက် ပေါ်က ဒုတ်တံလေး အပေါ်တက် လာအောင် ကြိုးစားနေမိ ကြတတ်တယ်။ “အလားတူပါပဲ။ စိတ်ပညာရှင် တွေကလည်း “စိတ်ဒိုင်ခွက်” နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကောက်ချက်ချတာ မှားနေကြ တတ်ပါတယ်။ အများစုက လူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူချက် မြင့်မားလာအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်လှုံ့ဆော်မှသာ ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။” လို့ Winston-Salem, North Carolina က Wake Forest University က professor တယောက်ဖြစ်တဲ့ Leary က ပြောပါတယ်။
တကယ် ဖြစ်သ့င်တာက လူတယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူချက်ကို အချက်ပြ ဒိုင်ခွက်တခုလို သဘောထား ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ “လူမှုဆက်ဆံရေး ဆီတိုင်ကီ” ကဆီနည်းနေ၊ မနေ ကြည့်ဖို့ သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီတာ လို့ပဲခေါ်ကြပါစို့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူချက်တွေ အရမ်းနိမ့်ကျ နေပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ပြုပြင်ရမယ့်အစား သူများတွေရဲ့ ကိုယ့်အပေါ် အမြင် တိုးတက်လာအောင်၊ သူများတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေလာအောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပြောရရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူချက်ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင် သလောက်ပါပဲ။ သူများတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး မပြေလည်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် နေရတာလည်း အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။Written By GG | Source lifehacker.com | Images from tugofthekite.com, piecesofmeblog.com, alcohol.addictionblog.org, consistent-parenting-advice.com and fierceandnerdy.com
အခု Post ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါ သလား၊ အသစ်တင်တိုင်း သိရအောင် Subscribe လုပ်လို့ရပါတယ်။
အောက်မှာ Email နဲ့ Subscibe လုပ်ထားရင် Mail ကနေတဆင့် အသစ်တင်တိုင်း ရမှာပါ။
The Bizarre History of the Vibrator: Lifting Light Weights Can Help Building Muscles as Heavy WeightsLittle Sleep Makes You Fat
Posted in Health Social Bookmarks
Categories	Superheroes & Characters
SEX (18+ Only)
Health TV Series
Myanmar Youth Media Club Facebook
Facebook Microchipped School Uniforms in Brazil Author Administrator	Brazil နိုင်ငံရဲ့ Vitoria da Conquista မြို့မှာ ကျောင်းသား၂၀,၀၀၀လောက်က GPS Chip တက်ဆင်ထားတဲ့ ကျောင်း ၀တ်စုံတွ စ၀တ်ဆင် နေကြပါပြီ။	Read more
Microchipped School Uniforms in Brazil
Samsung Patent List Includes iPhone5& iPad Mini Author Administrator	အခုချိန်ထိ မပြီးနိုင်သေးတဲ့ Apple နဲ့ Samsung ကြား မူပိုင်ခွင့် ကိစ္စရဲ့ ဒီနေ့သတင်းအရ Samsung က iPhone5နဲ့ တခြား Apple ထုတ်ကုန်တွေကို တရားရုံးဦးတိုက်လျှောက် ထားတဲ့စာရင်းမှာ ထပ်ထည့် လိုက်ပါပြီ။	Read more
Samsung Patent List Includes iPhone5& iPad Mini
Kinetic Floor Author Administrator	လူတွေရဲ့ကခုန် လှုပ်ရှားမှု ကနေ ရလာတဲ့ ရွေ့လျားစွမ်းအင် တွေကို အသွင်ပြောင်းပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ထုတ်ပေးနိုင် မယ့် Kinetic Energy Dance Floor တစ်ခုကို တီထွင် လိုက်ပါပြီ။	Read more
Top 10 Ways to Find Better Answers Online Author amedeo	သင်တို့လိုချင်သမျှ ရှာဖွေချင်သမျှ အားလုံးကို Google လိုက်လို့ရပေ မယ့် အကောင်းဆုံးနဲ့ အတိကျဆုံး ဖြစ်မယ့် အဖြေကိုတော့ အမြဲတမ်း ရှာလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ Online မှာ လိုချင်တဲ့အဖြေကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးရှာဖွေဖို့နည်းလမ်း ၁၀ ခုကို တစ်ချက်လောက် ကြည့်ရအောင်နော်။	Read more
Content View Hits : 8508436